Akụkọ - Ọnọdụ ugbu a na atụmanya nke PTA Chain na Market
PX bu isi akụrụngwa na ụlọ ọrụ polyester niile ， Mgbanwe nke ụlọ ọrụ ya nwere mmetụta dị oke mkpa na ụlọ ọrụ niile akọwapụtara. ibido banye na mmepe nke imeju afọ ojuju China na nyocha Xylene.
Nke mbu, leba anya na onodu PX zuru uwa na onodu a choro. Na mpaghara ụwa China, South Korea, India, Japan na United States họọrọ ise kachasị. , dị ka onye na - emepụta ihe kachasị ukwuu n'ụwa, India bụkwa ụgha kachasị achọ. N'ihi nnweta outstripping chọrọ ụlọ, ihe fọrọ nke nta ka 60% chọrọ kwa afọ chọrọ ịdabere na mbubata site na mba ndị agbata obi dịka South Korea na Japan. Na 2018, mmepụta PX nke China dị naanị nde 10.31, na mbubata ya ruru nde tọn 15.63, na isi ya, ọ dị mkpa mbubata karịa 1 nde tọn PX kwa ọnwa.
N'okpuru nduzi nke oghere dị n'ahịa na ịba uru inweta iji nye nkwado iwu maka mgbasawanye nke ikike mmepụta x x x nke China na China abanye oge ọhụụ na 2005N’iru ọmụmaatụ Hengli Petrochemical na Dalian, Shenghong Petrochemical na Lianyungang, Jiangsu N’afọ 2019, ikike PX ọhụrụ nke 4.5 nde tọn nke Hengli Petrochemical Company, Hongrun Petrochemical Company, nke etinyere na August, yana Hainan Refining na Chemical Phase II, nke etinyere na Ọktọba, arụchaala ọrụ azụmahịa. N'otu oge ahụ, na nkeji nke anọ, enwere mwepụta usoro echere, enwere ike ịmalite. A na-eme atụmatụ na ikike mmepụta ọhụụ ga-eru nde 10.3 nde n'afọ, mmụba nke 53% karịa otu oge ahụ n'afọ gara aga. Site na 2020 ruo 2022, a ka ga-enwe nde tọn 25, a ga-etinye ike ọhụrụ n'ahịa ahụ otu mgbe.
N ’iweghachi azumazu ulo n’etinye ihe PX China na ikike ile anya ga-agbanwe nke ukwuu. Site na mmụba ngwa ngwa nke ike mmepụta PX nke China, onyinye na usoro a chọrọ n'ọdịnihu na Northeast Asia ga-eji nwayọ ghọrọ njupụta, ma n'ọnọdụ nke ọnụ ahịa dị mma na uru, ọ nwekwara ike ibuga na mba ndị nwere ohere. Mmekọrịta azụmahịa ya na ndịda ọwụwa anyanwụ Eshia A na-enwekwa ike mbupụ otu ụzọ na-aghọrọ ire ahịa
Site n'echiche nke ọkọnọ zuru ụwa ọnụ na usoro achọrọ, China bụ isi mmalite kacha enye ụwa, kamakwa onye ahịa kacha ukwuu. Ike ikike nke China na-eme kwa afọ dị nde tọn 52.29, nke ruru ihe karịrị ọkara nke ọnụ ọgụgụ ụwa. Site n’uzo ahia ahia ahia zuru ụwa ọnụ, ọnụ ọgụgụ ndị China na-ebubata ya bụ 760 puku tọn, tumadi si Thailand, Taiwan na South Korea.
Site na ọnọdụ nnweta ụlọ, usoro uru ahụ bụ isi ihe na-egosi ntinye PT ụlọ. N’afọ 2011, PHP batara n’ike n’ike, nke mere ka akụrụngwa nke ike mmepụta pụta, nke butere mgbake azụmaahịa PDA. N'okpuru ọnọdụ asọmpi, uru dị ogologo oge na-adị na-emebi emebi, ewepụwo ikike nrụpụta nke azụ azụ, na ntinye na ọchịchọ chọrọ ka ọ bụrụ nke siri ike .PT mepere na 2017, PK batara na ọkwa nke imeziwanye uru nke ọganihu. N'afọ 2019, ọkwa uru PTA gbagoro 1700 yuan kwa ton.PK webatara n'ọtụtụ mmepụta ọhụụ.
Mmetụta mmeghari gburugburu na-eme gburugburu Terminal, mee ngwangwa polyester, ike ịgbasawanye Nnukwu ụlọ ọrụ polyester emeela nke ukwuu, nke bụ isi ọrụ nke ụlọ ọrụ polyester n'afọ abụọ na-adịbeghị anya. Ndị na-eso maka mgbasa, polyester na-abawanye, asọmpi siri ike, nke mere na ọkwa nke uru adalatala nke ukwuu, ikike mmepụta polyester n'ọdịnihu ga-abụ nke ezi uche.
Ka mgbasawanye ụlọ ọrụ na-ejikọtaghị ọnụ, usoro ihe eji arụ ọrụ siri ike na-arụkọta ọkwa uru nke ihe ọkụkụ polyester, ihe na-akpata uru ọghọm polyester n'afọ. Site na echiche nke ihe ndị ga - eme n'ọdịnihu, mbata polyester na-agbadata n'ọdịniihu n'ọdịnihu, yana nrụgide usoro na ụgwọ nrụpụta obere ego na-enyere aka ịgbasa uru polyester. Agbanyeghị, esemokwu azụmahịa nke Sino na US ga-emetụta ahịa ahụ ruo n'ókè ụfọdụ. Mkpokọta akwa akwa akwa China na-emetụta mbupụ uwe ndị China na United States, ọ bụ ezie na enwere ihe ịrịba ama nke mmezi na mkparịta ụka azụmahịa Sino US na nso nso a. Mmekọrịta Sino-US ga-eme ka mbịara ọnụ ahịa ndị China na akwa na-emetụta oke uwe China na-ebuga na United States. Agbanyeghi na enwere akara di ire na mkparita uka nke Sino-US na nso nso a, ederede EU na mgbochi mgbochi ahia nke China megidero nwa agbagoro n’aho ndi a, o doro anya. Nke a ga-emetụta mbupụ nke ndị China.